New Geekbench 5 Pro akara site na Mac mini ARM test | Esi m mac
New Geekbench 5 Pro Scores nke Mac mini ARM Test
Toni Cortes | | Mac Obere
Ọ karịala otu ọnwa kemgbe ahụ Craig Federighi ulo oru chupinazo nke oru Apple Silicon. Ọtụtụ bụ asịrị na Apple ga-eweta mgbanwe a na WWDC 2020, mana ihe ọ nweghị onye chere bụ na ọ gafeelarị.
Naanị ụbọchị iri ka e gosipụtara ya, e zigara Kits mbụ maka ndị mmepe, nke nwere ule Mac mini ARM na ngwanrọ kwekọrọ na ya ka ụfọdụ ndị mmepe nwere ike ibido "igwu egwu" na nke mbụ Apple sịlịkọn (ule nnwale) nke oge ọhụrụ. Ọ bụ ezie na Apple amachibidoro ya, nsonaazụ mbụ nke ule Geekbench 5 Pro na-agba ọsọ ugbu a.
Ọ bụ ezie na Apple amachibidoro ndị nwere Mgbanwe Kit Apple Silicon na-ebipụta data arụmọrụ nke Mac mini, na nsonaazụ nke abụọ nke Geekbench na-agba ọsọ na netwọkụ mmekọrịta. Ọ dị ka ị na-enye ụmụ gị drone ma gbochie ha ịnwale ya n'ime ụlọ. Agaghị ekwe omume.
A ụbọchị ole na ole mgbe kechioma mmepe natara Mac mini ARM Iji malite ịrụ ọrụ na ya, ule mbụ Geekbench nke ule ule a apụtaworị. Ma enwetara nsonaazụ ndị a na ngwa Geekbench nke na-agba n'okpuru Rosetta 2, n'agbanyeghị agbanyeghị Apple na-ekwu, ọ ka bụ emulator arụmọrụ wee belata arụmọrụ nke ngwanrọ ọ bụla.
Data nke Geekbech 5 Pro bipụtara taa ha dị adị n'ezie, ebe ọ bụ na a na-agba ọsọ ngwa a nwa afọ na Mac mini, na-enweghị Rosetta n'etiti. Enweela ike ịme ya site na ịmalite n'ime mgbake, na-egbochi ọrụ nchekwa na ntinye koodu nke ngwa ahụ.
Mac mini ARM gosipụtara MacBook Air na Geekbench
Geekbench nke ngwa a dị ezigbo mma na-eche na ọ bụ ihe nnwale na iPad Pro processor.
Geekbench na-egosi nsonaazụ nke 1098 isi maka otu isi na 4555 isi na ọnọdụ ọtụtụ. Ihe mbu edeputara na Geekbench nke di n'okpuru Rosetta bu ihe 800 n’otu isi na 2600 nwere otutu nkpuru n’otu oge.
Na akara a, Mac mini ARM dị n'elu a 2020 MacBook Ikuku, nke na-enweta nsonaazụ nke 1005 isi na otu isi na 2000 isi nhazi ọtụtụ cores n'otu oge.
Ihe data ahụ dị ezigbo mma, ọ bụrụ na anyị ewere na ọ bụ ule Mac mini, ya na onye nhazi nke ugbu a iPad Pro, A12Z Bionic. Eleghi anya, Apple Silicon mbụ a ga-ere ahịa ga-etinyeworị usoro nhazi ọhụụ nke dị elu karịa nke a ma kwadebe maka macOS Big Sur.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Mac Obere » New Geekbench 5 Pro Scores nke Mac mini ARM Test
Zoo akara ngosi desktọọpụ gị ngwa ngwa na Desktọpụ Ghost Pro
Eriri nke iMac Pro ga-adị ka nke iPhone 12